दनियाँमा भैली विसर्जन : लोक संस्कृतिको संरक्षणमा राज्य जिम्मेवार वन्नु पर्छ : भुसाल – ebaglung.com
दनियाँमा भैली विसर्जन : लोक संस्कृतिको संरक्षणमा राज्य जिम्मेवार वन्नु पर्छ : भुसाल
२०७४ पुष २२, शनिबार ०२:०७	Top News, थप समाचार
कमल पौडेल, खर्वाङ २०७४ पुस २२ । बडीगाड गाउपालिका २ दनियाँको आयोजनामा गत तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन देखी शुभारम्भ गरिएको भैली शुक्रवार सरस्वती विसर्जन गरी समापन गरिएको छ ।
सो विसर्जन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजक विष्णुप्रसाद भुसालले स्थानीय लोकसँस्कृतिको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउदै यस कार्यमा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले सघाउने बताए ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष, स्थानिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगाएत स्थानियहरुको सहभागिता रहेको थियो।
परम्परागत भैली टोली समुह दनियाँले खर्वाङ, ग्वालीचौर, लगाएतका स्थानमा आफ्ना साँस्कृतिक झलकहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
सो भैली समुहले झण्डै डेढ लाख रुपयाँ उठाएको र केहि रकम वचाएर सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने वडा सदस्य समेत रहेका स्थानिय गोम वहादुर रानाले जानकारी दिए ।
भैली गुरु हिरा वहादुर राना, पुरुसिँगे गुरु डिल वहादुर राना लगाएत १६ जनाको साँस्कृतिक समुह रहेको टोली ग्वालीचौरमा भएको न्वागी मेलामा भएको प्रतियोगीतामा प्रथम समेत भएको थियो।
वडीगाड गाउँपालिकाले यसवर्ष प्रत्येक साँस्कृतिक समुहलाई ५÷५ हजार समेत विनियोजन गरेको छ भने बडीगाड गाउँपालिकाले संस्कृति जगेर्नामा १० लाख विनियोज समेत गरेको छ । दनियाको सो समुहले हरेक वर्ष भैली कार्यक्रम मार्फत संस्कृति जगेर्नामा टेवा पुर्याउँदै आएको छ।
यसैवीच खर्वाङसंग जोडिएको गल्कोट नगरपालिका वडा नं. ११ रिघाको वडा कार्यालयको आयोजनामा साविकको रिघा ३ र ६ को खिरेदी धारा मन्दिरमा टोल भेला सम्पन्न भएको छ। भेलामा वडा अध्यक्ष डम्वर वहादुर श्रीसले वडा ले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा नगरपालिकाका कार्यहरुको जानकारी गराएका थिए । भेलाले रहले, खिरेदि किल्ले हुँदै लाम्चे सम्मको मोटरवाटोको स्तरोन्नतीको लागी उपभोक्ता समितिको गठन गरेको छ। जसको अध्यक्षमा दान वहादुर श्रीस, सचिवमा तिलक घर्ति, कोषाध्यक्ष सन्तु श्रीस लगाएत रहेका छन् । त्यस्तै पात्लेपानी खानेपानी उपभोक्ता समितिको संयोजकमा प्रेम चालिसे, सचिव रन वहादुर नेपाली र माया चालिसे कोषाध्यक्ष रहेका छन । कार्यक्रम चन्द्रवहादुर श्रीसको अध्यक्षता तथा झवि चालिसको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
पशुपति आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई नि प्र अ सुनारको उज्यालो उपहार !
ढोनपा र तमानखोला गांउपालिका स्तरीय खराल वंशउद्धार समितीको गठन